के तपाईं डचटाउन गर्व गर्नुहुन्छ? • DutchtownSTL.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
के तपाईं डचटाउन गर्व गर्नुहुन्छ?
प्रकाशित जुन 30th, 2020
अर्डर गर्नुहोस् तपाईंको डचटाउन गर्व साइन यहाँ:
तपाइँको चिन्ह अर्डर गर्नुहोस्
डचटाउनमा स्वागत छ, एउटा यस्तो छिमेक जो हाम्रो शहरको अतीतको बोझ वहन गर्दछ र आज हामी को हौं भन्ने सत्यमा अग्लो छ। हामी सेन्ट लुइसको सब भन्दा जनसंख्या भएको र घनी छिमेकमा छौ। हामी छिमेकमा छौं जुन बृद्धि, संकुचन र फेरि बृद्धि भएको छ। हामी डचटाउन गर्व.
डचटाउन गर्व चिप स्मिथ द्वारा भिडियो क्रस ग्रान्ड.
हामी मध्ये कोही सदाको लागि डचटाउनमा छौं। सय वर्ष भन्दा अघि, हाम्रा परिवारहरूले ईन्ट भवनहरू, चर्चहरू, र सडकहरू बनाए जुन दक्षिण सेन्ट लुइसमा समयको परीक्षा सामना गर्दछन्। हामीले केहि साथीहरू टाढा रहेको देख्यौं, व्यवसायहरू आउँदै गरेको देखे र हाम्रा छिमेकीहरूको अनुहार पनि परिवर्तन भएको हामीले देख्यौं। हामी कहिँ पनि बाँच्ने छैनौं।
हामीमध्ये कोही नयाँ अवसरहरूको लागि डचटाउन सरेका छौं। हामी आर्थिक रूपमा विस्थापित भएका छौं वा सस्तो बसोबासको खोजीमा आएका हुन सक्छौं। हाम्रो उपस्थिति स्थिर डचटाउनको जनसंख्या र भविष्यका बासिन्दाहरूको लागि ठूलो समुदाय बनायो। एकता सबै भन्दा राम्रो समुदाय हो।
हामीमध्ये कोही आप्रवासी छौं। हामी संसारभरिबाट आएका छौं र यहाँ २ 25 बर्ष वा एक दिन मात्र भएको छ। पहिलो डचटाउन आप्रवासीहरू जस्तै हामी नयाँ स्वादहरू, कपडा, चलनहरू, र एक जीवन्त पड़ोसी बनाउन को जीवन शैली को ल्याए।
हामी सबै हौं डचटाउन गर्व। सेन्ट लुइसको सबैभन्दा विविध, धूर्त, र अगाडि सोच्ने गाउँहरू मध्येको एक हुन पाएकोमा गर्व छ। यहाँ समृद्धि खोज्न गर्व छ। हामी डचटाउन घर किन भन्छौं श the्कास्पदहरूलाई बताउन गर्व छ।
हामी डचटाउनलाई छनौट गरेर घर भन्छौं। हामी सँगै आउने र छिमेकीहरूसँग समुदाय बनाउने छनौट गर्दछौं जुन उनीहरूको जीवन जस्तो देखिन वा उनीहरूको जीवन एकै खालका नहोलान्। हामी हाम्रा छिमेकीहरूको डचटाउन छनौट गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दछौं, उनीहरू को हुन् ध्यान दिएर, कसलाई प्रेम छ, तिनीहरू कस्तो देखिन्छन्, जीवनयापनको लागि के गर्छन् वा कुन परिस्थितिले उनीहरूलाई यहाँ ल्यायो।
यदि तपाईं हामीसँग सामेल हुन चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंसँग उत्साहित छौं। तर चेतावनी दिनुहोस्: हामी हाम्रो ईतिहासको बारेमा सचेत छौं र दुई पटक उही गल्ती गर्न थाकेका छौं। हामी सट्टेबाजहरू, द्रुत फिक्सरहरू वा अझ खराब, जो कोहीलाई आफ्नो छिमेकीलाई अँगाल्न र परिवर्तनलाई अँगाल्न तयार छैन।
हाम्रो अगाडीको मार्ग एक साधारण हो र हामी यसलाई भविष्यमा हाम्रो अगाडि फैलाएको देख्छौं। त्यसैले तपाइँको आस्तीन रोल अप र एक सदस्य बन्नुहोस् डचटाउन गर्व जब हामी हाम्रो विगतलाई चिन्छौं, हाम्रो वर्तमानलाई मनाउँछौं, र सँगै हाम्रो भविष्यको लागि तयारी गर्दछौं।
तपाईको डचटाउनको गर्व देखाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? अर्डर गर्नुहोस् तपाईंको डचटाउन गर्व पछाडिको चिन्ह आज तपाईंको मूल्य नाम दिनुहोस्।
तल दायर गरिएको डचटाउन. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. डचटाउन र फोटोग्राफी. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो जुलाई 1st, 2020 .
डचटाउन STL.org डचटाउन के तपाईं डचटाउन गर्व गर्नुहुन्छ?